ကတိပြုချက် -NFT အခြေပြု fixed lending protocol သည်အောင်မြင်သောရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းကိုကြေငြာသည်။ BitcoinEthereumNews.com
Pledge Finance သည် algorithm ကို ဦး ဆောင်သောဘက်စုံဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္financeာရေး (DeFi) ဂေဟစနစ်ဖြစ်ပြီးရိုးရာငွေကြေးကဏ္ sector ကို ဦး တည်သော NFT စနစ်သုံးအပေါင်ပစ္စည်းချေးငွေပလက်ဖောင်းကိုစတင်ကြေငြာသည်။
Binance Smart Chain (BSC) အခြေပြုပလက်ဖောင်းသည်အခြားအများပိုင်ကွင်းဆက်များနှင့်အပြည့်အ ၀ လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အခြား DeFi ပလက်ဖောင်းများသည် Pledge ၏မြောက်မြားစွာသောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်လိမ့်မည်။
ကတိစကားသည် DeFi နှင့်ဘဏ္Betweenာရေးအကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးပေးသည်
ကတိကဝတ်ဘဏ္ာရေး သုံးစွဲသူများသည်ဗဟိုလဲလှယ်မှုမလိုအပ်ဘဲ cryptocurrencies လဲလှယ်နိုင်ရန်ငွေစျေးကွက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်မည့်ငွေစုငွေစုများပါ ၀ င်လိမ့်မည်။
ဤငွေစျေးကွက်များသို့ငွေဖြစ်လွယ်မှုပေးနိုင်ရန်အတိုးနှုန်းကိုရေကန်တစ်ခုစီ၌ cryptocurrencies များအတွက်ရောင်းလိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားကို algorithmically fixed နှင့်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
အစပိုင်းမှာတော့ဒီရေကန်တွေကို Pledge ရဲ့ native token, PLGR ကနေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိမ့်မယ်၊ ဆိုလိုသည်မှာသုံးစွဲသူများသည် Bitcoin (BTC) နှင့် Ethereum (ETH) ကဲ့သို့လဲလှယ်မှုပြုလုပ်ရန် PLGR ကို ၀ ယ်ရန်လိုလိမ့်မည်။
algorithm သည် Pledge အသုံးပြုသူများအားပွတ်တိုက်မှုအနည်းငယ်နှင့်မျှတသောတန်ဖိုးဖြင့် cryptocurrencies ကို PLGR နှင့်လဲလှယ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုသေချာစေလိမ့်မည်။
Pledge ၏ cryptocurrencies များအပြန်အလှန်ဖလှယ်ရန် PLG ကိုသုံးခြင်းအပြင် Pledge ၏ native token သည် Pledge ၏ငွေများ၊ ငွေချေးခြင်း (သို့) ဆင်းသက်လာသည့်စျေးကွက်များအတွက်ငွေဖြစ်လွယ်မှုကိုပေးရန်ရွေးချယ်ပါကကိုင်ဆောင်သူများအားသတ်မှတ်အတိုးနှုန်းပေးချေလိမ့်မည်။ ထို့ပြင်အခြားငွေချေးခြင်းဆိုင်ရာ protocols များနှင့်မတူဘဲ Pledge အသုံးပြုသူများသည်ရေကန်မှထုတ်ပေးသောချေးငွေအတွက်ပုံသေငွေချေးသတ်မှတ်ချက်များပါ ၀ င်သောကွဲပြားခြားနားသောသက်တမ်းရင့်ငွေရရေကန်မျိုးစုံကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
PLGR သည်စုစုပေါင်း PLGR ၃ ဘီလီယံထောက်ပံ့လိမ့်မည်။
Pledge ၏အနကျအဓိပ်ပါယျစျေးကွက်သည်အခြားရေကန်များတွင်မှန်းဆရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုကာကွယ်ရန် DeFi ကုန်သည်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအတိုးနှုန်းငွေပေးချေမှုကိုလဲလှယ်ပေးသောထူးခြားသောဆင်းသက်လာသောစမတ်စာချုပ်များဖြင့်မောင်းနှင်သည်။
Pledge ၏ cross-chain interoperability ကြောင့်ဤရေကန်များသည်အခြားဗဟိုကျကျပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်လည်းတည်ရှိနိုင်သည်။
ကတိကဝတ်ဘဏ္ာရေး အခြား DeFi protocols များနှင့်ပိုမိုကွဲပြားစေရန် NFTs များကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချနေသည်မရ။ Pledge သည်ကန ဦး သတ်မှတ်ထားသောနှုန်းနှောင်ကြိုး ၅၀ ကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။
ဤအရာများကို NFT အခြေပြုငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်တွင်အပြည့်အ ၀ လဲလှယ်လိမ့်မည်၊ NFT တစ်ခုစီသည်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဝတ္တရားများနှင့်ဘဏ္instrumentာရေးတူရိယာအတွက်အထွက်နှုန်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ဤချဉ်းကပ်မှုသည် NFTs များအတွက်လက်ရှိစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအရင်းတည်။ ၎င်းကိုငွေချေးစာချုပ်များ၊ ချေးငွေများနှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျများကဲ့သို့ပိုမိုရရှိနိုင်သောငွေများဖြင့်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည်။ DeFi ကမ္ဘာသို့.
Pledge ၏အန္တိမရည်မှန်းချက်သည်ဒေါ်လာထရီလီယံဒေါ်လာငွေကြေးထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စျေးကွက်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ဖြစ်သည်။ အမွေဘဏ္financialာရေးကဏ္ the သည်ဆန်းသစ်ပြီးဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောလယ်ဂျာသစ်နေရာနှင့်ပိုမိုနီးကပ်လာသည်။
Pledge ၏ပထမ ဦး ဆုံးပုဂ္ဂလိကပတ် ၀ န်းကျင်အောင်မြင်မှုသည် ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာတွင်ဒေါ်လာ ၃ သန်းရရှိခဲ့သည်။
ပေါင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်အဆင်ပြေသောအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုလဲလှယ်ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည်၎င်း၏လွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းစေရန်၊ လက်ရှိ NFT စျေးကွက်ကိုချဲ့ထွင်ရန်၊ ကုန်သွယ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့် NFT သုံးစွဲသူများအားပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် NFT တန်ဖိုးချ/စျေးနှုန်းကိုအရှိန်မြှင့်ရန် NFT ဖြတ်ကျော်ကွင်းဆက်လည်ပတ်မှုနှင့်ဘက်စုံပိုင်ဆိုင်မှုကုန်သွယ်ရေးတို့ကိုပေါင်းစပ်ရန်ကတိပြုသည်။
ပလက်ဖောင်းသည်၎င်း၏အဓိကစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ကျယ်ပြန့်သောနည်းပညာနှင့်ဘဏ္experienceာရေးအတွေ့အကြုံကိုဆွဲယူသည်။ စီအီးအိုတိုနီချန်းသည်စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခုရရှိပြီးကွန်ပျူတာသိပ္ပံနောက်ခံနှင့်အမှတ်စဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နှင့်နတ်သမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
သူ၏ယခင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွင် Chan သည် Windows 95 ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရေးသားရန်ကူညီခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံး operating system ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Pledge ၏ CTO, Michael Ren သည်ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် peer-to-peer ငွေချေးကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်ဥာဏ်ရည်တုသိပ္ပံပညာရှင်အကြီးအကဲဖြစ်ခဲ့ပြီးနှစ်စဉ် ၀ င်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံကျော်ရှိသည်။
၁၅ နှစ်ကြာ fintech နှင့်အတူ Ren သည် blockchain protocol၊ လူထုအတွေ့အကြုံနှင့် Pledge အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုတွန်းအားပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
Pledge ၏အကြီးတန်းထုတ်ကုန်မန်နေဂျာ Douglas Hill သည် Pledge ၏ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦး ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏ငွေကြေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများအစုံသည်စျေးကွက်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အာမခံသည်။ Hill သည်ယခင်က machine learning နှင့် augmented reality တို့၌အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်၊ ကာယကုထုံးနှင့်အားကစားလုပ်ငန်းအတွက်ပထမဆုံး ML အခြေခံပလက်ဖောင်းကိုရှေ့ဆောင်ခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သောအရည်အချင်းရှိသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏ပံ့ပိုးမှုအားအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအလားအလာနှင့်ပေါင်းစပ်။ Pledge သည်အနာဂတ်ဘဏ္financialာရေးကဏ္ bring ကိုဆောင်ကြဉ်းရန်သေချာသည်။
Pledge Finance သည်ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ revolution ကိုတော်လှန်ရန် NFTs ကိုမည်သို့သုံးရန်စီစဉ်သည်နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်၎င်းတို့၏ပင်မစာမျက်နှာသို့သွားပါ ဒီမှာ.
Pledge ကိုလိုက်နာပါ တွစ်တာ
Pledge အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းပါ ကွေးနနျးစာ
Pledge's blog တွင်စာရင်းသွင်းပါ အလယ်အလတ်
Pledge on နှင့်ပူးပေါင်းပါ စိတ်တိုးပွား
Pledge ၏နည်းပညာကိုစူးစမ်းပါ Github
ဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ် - [အီးမေးလ်ကာကွယ်ထားသည်]
PLEDGE ဘဏ္INာရေး ဒီအကြောင်းအရာရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသတင်းထုတ်ပြန်ချက်သည်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
Tags: ကြေညာချက်များ, သတ်မှတ်ထားတဲ့, ရံပုံငွေရှာ, ချေးငွေ, NFT ကိုအခြေခံသည်, ပေါင်, protocol ကို, အောင်မြင်သော